IiNcwadi zeNcwadi zeBalawuli kwiLwimi le-9 lokuFunda kweBakala
ImiSebenzi yeeNkcukacha zoLwazi kwiNcwadi ye-9 yoBanga lokuFunda
Gubha ukutya kwabo okufunayo kunye nale mi sebenzi ehlala
Nangona kubekho ingxoxo malunga neminyaka embalwa edlulileyo malunga nokufunwa kwabafundi besikolo esiphakamileyo ukuba bafunde iiklasiki , le mi sebenzi iyakubonakala kwizintlu zokufunda eziphakamileyo zezikolo ezi-9. Kubhaliweyo kwinqanaba elifanelekileyo kubaninzi abasanda kutsha, baya kunzima abafundi ukuba bahlakulele ukufunda okunamandla, ukubhala, nokuhlalutya izakhono, kwaye bakhuthaza ingxoxo malunga nemeko yabantu.
Oku kwachazwa ngenyameko ingqungquthela yeengcambu zemfazwe yabhalwa ngumntu owayehlala kuyo xa elwa kwiMfazwe Yehlabathi I. Le ncwadi ichazwa ngumntu oneminyaka engama-20 ubudala, uPaul Bäumer, ogama lakhe lokuxinzeleleka kwengqondo nangokwenyama kwejoni-kunye ukugqithiswa kwengqondo ekugqibeleni kubomi basekuhlaleni emva kokubuyela ekhaya-ukujonga ingqiqo esingaqapheliyo.
Le satire ebhubhisayo yokunyuka kwintlanzi ukuya kutshintsho nokubuyela kwakhona kwi-tyranny ihlala ifanelekileyo njengengqinamba yobuthathatyathi obunokulingana namhlanje njengokuba kwenzayo xa bekujoliswe ukuba ijolise ngokusetyenziswa kakubi kweRussia yaseSoviet.
Ngowe-1961, iGriffin, intatheli engummhlophe, wamisela ukuhamba nge-American South ngokukhawuleza kwindoda ebomnyama (wayenesikhumba sakhe okwethutyana okwethutyana) ukwenzela ukuba abike izinto ezingobubomi phantsi kokuhlukana. Endleleni, ubhekana nobandlululo kunye neengqungquthela inkolelo yokuba ukucwasa ngokobuhlanga kwakuyinto engaphezu kweyona nyaniso.
Leveli yinto yokuqala kwi-Trick's famous trilogy of life eChina ngaphambi kweMfazwe Yehlabathi I, ezinye zazo zisekelwe kumava akhe. Iphumelele umvuzo wePulitzer ngowe-1932, yayiyinto ebalulekileyo ekuphumeleleni kweBuck yeNobel Prize yoLwazi ngo-1938, kwaye yajika yaba yimpumelelo yefilimu. Le ncwadi ibeke uluhlu lwezona zinto zithengisa kwakhona ngo-2004 xa zikhethwa njengeyona nto ekhethiweyo yeClub ye-Book ye-Oprah.
Inveli kwangoko kunye kunye neentlekele, amaziko amakhulu okulindela kummandla oselulazana ogama linguPip, onikwe ithuba lokuba azenzele ngendoda ngumntu onokumangalisa. Ibonisa uluhlu olumnandi lweklasi, imali kunye nenkohlakalo ngexesha le-Victorian Era.
Usinike ezinye zeendlela ezingakukhunjulwa kuzo zonke iincwadi zaseMerika, ezinye zazo zikhuni, kodwa i- Poe yayingaphezulu nje kwombhali wexhala. Kwakhona wayengumfundi weemfihlakalo, u-adventure, kwaye ngokuhlala ehlekisayo, zonke ezibhalwa ngumyalelo ofanayo weSiNgesi.
Xa uMcCullers eshicilela oku, inveli yakhe yokuqala, kwiminyaka engama-23 kuphela ubudala, yaba yinto evelele. Ininzi malunga ne-heroin ye-heroine, uMick Kelly, iya kubantwana abaselula namhlanje, abanokufumana ukulangazelela okufanayo nokuzimela.
Ingxenye yesithathu yamanveba olwaphulo-mthetho obhaliweyo oonobumba bokubhala uSherlock Holmes , le ncwadi iye yahlala iyintandokazi yabafundisi besiNgesi esikolweni esiphakeme. Akukona nje kuphela enye yeetekisi ezibhekiselele kuzo zonke iinkcukacha zobuqhetseba obuza kuvela, liyimodeli yendlela yokwenza umzobo, ukwakha uxolo kunye nokuzisa isenzo kwisigqibo esanelisayo.
Eyokuqala kwimiqulu yamanqaku asixhenxe e-autobiografi ebhalwe ngu-Angelou, le ncwadi yapapashwa ngokutsha ngo-1969. Ingxelo ebonakalayo yokuguquka kuka-Angelou kwixhoba lokudlwengula nokucwaswa kwintombazana enomntu ohloniphekileyo ngumzekelo okhuthazayo kunoma ubani ofuna ukunqoba uxinzelelo.
I- Iliad yinkondlo ebalulekileyo ebizwa ngokuba nguHomer kunye neyona ndlela endala kakhulu yeencwadi zaseYurophu. Ulwahlula kwiincwadi ezingama-24, ibali le-adventure elibekwe kwiminyaka yokugqibela yeMfazwe yeTrojan eyazisa abafundi kwezinye iimbambano ezidumileyo kunye nabalinganiswa kuzo zonke iincwadi zakudala.
U-Jane Eyre usemvelweni wenveli yothando (kunye nomnye ongathandabuzekiyo wasungula iindibano ezininzi zeentlobo), kodwa kwakhona uninzi lweencwadi. Kwi heroine yayo, abafundi baya kufumana intombazana ehlakaniphile kunye nengqiqo ezayo ebudala bembulelo ngamandla akhe angaphakathi kunye namandla okuhlenga.
Kuye kuthiwa yincwadi entsha yeprot-feminist ngendlela abadade boMatshi-Meg, Jo, eBeth, kunye no-Amy-kubhalwe njengabesifazane abasondelene ngokupheleleyo kunye neengcamango, izifiso kunye nokuthanda. Abafundi banokufumana ugqozi kumnye okanye odade abaninzi njengoko bezithungela ubomi ngaphandle kwabo ubunzima bokukhula eNew England ngexesha leMfazwe yoLuntu.
Ukuhlukana kwe-Guardian yeencwadana ezili-100 ezona zilungileyo zaso sonke ixesha, zibiza ngokuthi "Nkosi yeeNtlanzi," ... ziqwalasele ngokucokisekileyo ukufundwa kwabaselula abangabandakanywa kwiimigaqo neendibano. "Kunokuba kudalwe iparadesi kwisiqithi apho eli qela leNgesi Izikolo ezikolo ziye zahlanjululwa, zidala i-dystopian nightmare apho umgudu wokuzikhusela ungaphezulu kakhulu.
Le nkqubela kwi "Iliad" ichaza uhambo oluyiminyaka eli-10 ebuyela ekhaya elithathwe ngu-Odysseus (kamva u-Ulysses kwiimbali zamaRoma) emva kokuwa kweTroy. Njengaye eyandulela ngaphambili, yinkondlo eqaqambileyo ephazamisa umlingisi wayo oyintloko kunye namava kunye neempawu esiye sazibona ngeqhawe.
UStebbeck ubeka ipakeki kule ncwadana yabasebenzi ababini abafudukayo, uGeorge kunye nomhlobo wakhe uLennie, indoda ekhupha umzimba kodwa ingqondo yomntwana. Isenzo senzeke ngexesha loKuCaluleka kweNtlupheko kwaye lijongene neengqungquthela zobandlululo, ubulili kunye nokungafani koqoqosho.
Ngaphandle nje kweengcamango ezilula zomlobi waseCuban obamba intlanzi enkulu (kuphela ukuyilahleka), yinto yezobukroti, ubuqhawe, kunye nemfazwe yindoda enye kunye nemingeni engaphandle nangaphakathi.
Beka esikolweni sebhola e-New England ngethuba leminyaka yokuqala yeMfazwe Yehlabathi II, amaziko amanoveli ngobuhlobo phakathi kwe-introverted, i-Gene yengqondo kunye nomhle, umdlalo wezemidlalo uFinny. Ubuhlobo buba engqondweni kaGen isicatshulwa sezinto ezicatshulwayo zokukhohlisa kunye nokuba kwenzekani ngenxa yoko kuya kubuyiselwa kubomi babo bobabini.
Enye ibali elizayo, eli lichaza ubomi bukaFrancie Nolan, oneminyaka eyi-11 xa le ncwadi iqala, ukususela ngo-1902 ukuya ku-1919. Izinto ezinzima ziqhakaza kummandla omncinci waseFrancie eWilliamsburg, eBrooklyn: uthando, ukulahlekelwa, ukunyeliswa, ukuhlazeka, kunye , ekugqibeleni, ithemba.
Incwadi kaHarper Lee yokungafani kohlanga eMerika yaseMzantsi Melika kuma-1930 mhlawumbi iyincwadi efundwa kakhulu kunazo zonke kwiincwadi zaseMelika. Kwaye sizathu esihle. I-Pulitzer-winner ijongene neminye imiba enzima, kodwa njengoko kubonwe ngamehlo kaScout Finch oneminyaka emithandathu ubudala, kuyisikhumbuzo esibuhlungu besandla sobubele kunye nesilingo sobulungisa.
Impumelelo engxamisekileyo xa ipapashwe ngo-1938, le ngongoma yenkathalo inkwenkwana inika kwisilwanyana sasendle iyakhazamisa njengoko ikhupha intliziyo. Isifundo esona siphezulu kukuba kwiimeko ezibuhlungu zobomi kukho ubuhle kunye nenjongo.
Iincwadi eziphezulu zokufunda kwiBhangi
"Injongo yeNja" kunye neencwadi eziNgcono zeenja zeNkcitho
Abaninzi beMatriki beMatriki beLizwe be-'80s
I-Top 10 uPaul McCartney Iingoma zee-80s
6 Iincwadi Eziphefumlelweyo
I-European Pop Pop / Rock Artists of '80s
Eyona nto ibhalwe ngokugqithiseleyo ngamanqaku angama-80s
Iimpawu eziphezulu ze-Agatha Christie (Ikhasi 3)
Inyosi ngokubhekiselele kwi-Wasp: Ukungafani kunye nokufana
I-Binghamton Yunivesithi ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IsiFundo seFrench: Ukuba iClause Threads, Umqathango wokuqala
U-Michelle Obama kunye ne-American Flag
Isiqulatho sesishwankathelo se-Agamemnon ngu-Aeschylus